पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवार बन्नेको सदस्यता खारेज « Lokpath
पार्टीका उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवार बन्नेको सदस्यता खारेज
रुपन्देही, २२ कात्तिक । नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवार बनेका नेताहरुको पार्टी सदस्यता खारेज गरेको छ ।
पार्टीको उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवार दिएको भन्दै एकजना प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार र पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारसहित उनीहरुका प्रस्तावक र समर्थक गरी १८ जनाको पार्टी सदस्यता खारेज गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले पार्टीको विधानअनुसार रुपन्देही क्षेत्र नं. १ को ‘ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद पौडेल तथा उनका प्रस्तावक खुमलाल गौतम र समर्थक नीमबहादुर थापाको पार्टी सदस्यता खारेज गरेको बताए ।
त्यस्तै, क्षेत्र नं. ३ को ‘क’ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जिल्ला सदस्य ओमकुमार श्रेष्ठ र उनका प्रस्तावक नारायणबहादुर कार्की र समर्थक राजेश जिसी, क्षेत्र नं. ३ को ‘ख’ बाट प्रदेश सभा समस्यमा नेपाली काँग्रेस वीपीबाट उम्मेदवारी दिएका डोलराज भुसाल तथा उनका प्रस्तावक सन्तकुमार यादव र समर्थक रामनारायण अहिरलाई पार्टीको साधारण सदस्यता नरहने गरी कारबाही गरेको सभापति रज्जाकले जनाए ।
त्यस्तैगरी, रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका अमृतलाल भट्टराई र उनका प्रस्तावक शालिकराम पाण्डे तथा समर्थक दिनेशप्रसाद पाण्डे, क्षेत्र नं. ४ को ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यतामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि वीरेन्द्र कलवार र उनका प्रस्तावक सीताराम पाल तथा समर्थक मनोजकुमार कलवार, क्षेत्र नं. ५ को ‘ख’ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि अमेरिका कोहार तथा उनका प्रस्तावक कलामुद्दिन मुसलमान र समर्थक दिनेशचन्द्र बर्मालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको रज्जाकले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: २०७४,कार्तिक,२२,बुधबार ०९:४५
भाइको टाउकोमा बन्दुक ताकेर १५ वर्षीया बालिकाको सामूहिक बलात्कार
काठमाडौं । १५ वर्षीया बालिकाको सामूहिक बलात्कार भएको छ । ४ जना पुरुषले गोली देखाएर उनको सामूहिक बलात्कार गरेका हुन्
काठमाडौं । एक महिला गाडीमै बलात्कृत भएकी छिन् । कामबाट घर फर्की रहेकी महिला गाडीभित्रै बलात्कृत भएकी हुन् । यो
नवजात शिशुसहित तीन जनाको मृत्यु प्रकरण अपडेट : शव पोष्टमार्टमका लागि पठाइयो, श्रीमानको खोजी तीव्र
काठमाडौं । बुधवार बिहान सर्लाहीमा अपत्यारीलो घटना घट्यो । सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका–३ भेल्हीस्थित एक पोखरीमा ९ दिनको शिशुसहित तीन जनाको
१२ वर्षीय बालकले गरे आफ्नै दिदीको बलात्कार, गर्भवती भएपछि खुल्यो पोल
काठमाडौं । १२ वर्षीय बालकले आफ्नै दिदी बलात्कार गरेका छन् । आफ्नै १६ वर्षीय दिदीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले
वर्तमान सरकारले स्वास्थ्य माफियाको संरक्षण गरेको सांसद बस्नेतको आरोप
सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरुमा घमण्ड नहोस् : सांसद चौधरी
निर्वाचन आयोगले गर्‍यो ४१ दलको दर्ता खारेज (नामावलीसहित)
नेप्सेको पुरानो वेबसाइट चलेन, लगानीकर्तालाई तथ्यांक हेर्न समस्या
‘पियारी’का गायक जोसेफ र धर्मेन्द्रको ‘जिन्दगीले घुमायो’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
अफगानिस्तानमा भएको दोहोरो भीडन्तमा परी ४१ तालिबानी लडाकू मारिए
भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा साउन २२ गतेबाट लगाइँदै
संसदमा महेश बस्नेतको त्यो कविता